Amanethiwekhi Omphakathi ngezinombolo | Martech Zone
Amanethiwekhi Omphakathi ngezinombolo
NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, i-2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Izolo, sikhombise i-Infographic enhle kufayela le- Umlando Wezokuxhumana Komphakathi. Namuhla, sinenye i-Infographic emnandi - Isimo Samanje Sezinethiwekhi Zokuxhumana. Umbono ojulile womhlaba wonke wokuxhumana nomphakathi ngosayizi, inani labantu, nokukhula - okunikeza ukuqonda okuthile kokuthi ngabe sifinyelele endaweni yokugcwala. Le infographic iyisizotha se- Ziba Imidiya Yezokuxhumana.
Ishadi elilodwa elinganikeza umbono ongalungile ngu Ning, Oshintshe imodeli yayo yebhizinisi kusuka kumanethiwekhi amahhala kuya kwamakhokhelwe. Vele babezolahlekelwa abantu abambalwa ekuhambeni - kepha empeleni bakhula kahle ngo-2011 njengeSoftware njengomhlinzeki wenethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Lapho uDilbert Enza Amahlaya we-SEO…
UJeremy A Williams
Jun 24, 2011 ku-12: 08 PM
Impela i-infographic ethokozisayo, kepha bekungekho izinombolo noma kuphi! Kuhle ukwazi ukuthi iPlaxo yindawo lapho kuthinteka khona inani labantu, kepha bekungaba wusizo kakhulu ngezinombolo ezithile ezinzima lapho.
Siyabonga ngokwabelana noDoug
Jun 24, 2011 ku-12: 20 PM
Sawubona uJeremy! Imininingwane nemiphumela kusembikweni obhalwe ezansi kwe-Infographic (bekufanele ngabe ngikushilo lokho eposini! Kuku- http://bit.ly/2011-social-analysis
Ngiyabonga ngokungigcina ngithembekile!
Jun 24, 2011 ku-12: 44 PM